Fanitarana ny seranana Ivato: afaka handray fiaramanidina goavana indrindra A380 | NewsMada
Fanitarana ny seranana Ivato: afaka handray fiaramanidina goavana indrindra A380
40 % izao ny asa vita tanterahin’ny orinasa Colas sy ny Bouygues Bâtiment International momba ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eo Ivato sy Nosy Be, 13 volana taorian’ny nanombohan’ny asa. Tonga nijery ny asa teny an-toerana ny filoha Rajaonarimampianina, ny faran’ny herinandro lasa teo. 60 % ny fandrosoan’ny asa amin’ny ankapobeny eo Ivato, raha ny momba ny trano, ny lalana fidinana sy fiakaran’ny fiaramanidina (piste),ny fanadiovan-drano.
Miasa tsy tapaka andro sy alina ireo orinasa roa, hatramin’izao tsy mbola nisy tranga loza. Tsy sakana ho an’ireo orinasa ny fotoam-pahavaratra, na ho an’ny asa any ivelany izany. Nahafahana nanome asa mivantana na tsy mivantana olona 1.000 izao fanitarana izao. Vita ary efa azo ampiasana izao ny piste eo Ivato
Tsy tambo isaina ireo fitaovana sy kojakoja samihafa nampidi-bola ho an’ny orinasa hafa eto an-toerana, toy ny simenitra, ny vato, ny vy, sns…Manaporofo ny lanjan’ny fampiasam-bola fanavaozana io seranam-piaramanidina io izany, 96 tapitrisa euros.
Vinavinaina ho tokanana ny volana 2020 ny eo Ivato, raha zahana ny fandroson’ny asa, araka ny nambaran’ny ao amin’ny Ravinala Airports. Mirefy 17.500 m2 ny toeram-piantsonana iraisam-pirenena vaovao, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, voasokajin’ny IATA (Association du Transport Aérien International), afaka handray mpandeha 1,5 tapitrisa sy fiaramanidina goavana indrindra hatramin’izao, Airbus A380.
Hotokanana amin’ity taona ity ny any Nosy Be
50 % ny fandroson’ny asa any Nosy Be, efa vita ny faran’ny taona 2017 ny « piste ». manavao ny trano sy ny manodidina ny Ravilana Airports, ankehitriny. Efa vita ny ampahany voalohany, miditra amin’ny ampahany faharoa ny asa izao. Mitentina 15 tapitrisa euros ny fanavaozana sy ny fanitarana rehetra atao any Nosy Be ary heverina hotokanana amin’ity taona ity.
Ny Ravinala Airports izao no mitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be, mandritra ny 28 taona. Vahiny no tompon’andraikitra voalohany na “Ravinala” aza ny anarany. Tokony hifaninan’ny Malagasy amin’ny vahiny izany fahaiza-mitantana sy ny fikojakojana ny orinasa izany. Tsy ho voatanisa eto daholo ireo orinasa malagasy potika, satria ny Malagasy ihany no lohany tamin’izany sy ny fanjakana malagasy ihany no tompony.